Iyo Infinity Blade Trilogy Inowanikwa Kudhawunirodha Yemahara kune Yakatemwa Nguva | IPhone nhau
Iyo infinity Blade trilogy inowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi
Iyo yagara ichidana kune vashandisi veApple kuti vagadziri vagara vachisarudza kutarisa papuratifomu yeIOS kuvandudza mitambo yavo. Asi kwechinguva ikozvino, zvinoita sekunge ivo vanogadzira vari zvakare kutarisa kune anokwikwidza chikuva kuti vatange yavo inoshamisa mitambo.
Kwechinguva ikozvino, mitambo yakawanda inowanikwa pane ese mapuratifomu, kunyangwe chikuva cheApple chinopa mari yepamusoro nekuda kwekunetseka kwekubira mitambo uye kunyorera. Asi kuchine mitambo senge Infinity Blade saga iyo isiri kuwanikwa muGoogle Store kuti vashandisi veIOS chete vagone kunakidzwa nayo.
Pane imwe nguva, mugadziri weInfinity Blade anga achipa akasiyana magemhu emutambo uyu mahara, asi panguva ino, pamwe ichaitwa muna Chikunguru 4 muUnited States, mushambadzi arikupa trilogy yakazara zvishoma. hongu kwenguva shoma. Hatizive kana ichizowanikwa chete nhasi kana kuti ichizogara mamwe mazuva akati wandei, saka zvakanakisa zvatingaite kurodhaunira dai tanga tisati tashandisa mukana upi noupi wemikana iyo mugadziri waakatipa kuti tiite kurodha pasi zvemahara.
Ndokunge, kana tichizoda nzvimbo yakakwana inowanika pane yedu iPhone kana iPad, sezvo mutambo wega wega uchidarika gig pakureba, ingozvirodha pasi kubva pandakangoisa saizi yacho inowedzera zvakanyanya, saka zvakanakisa iwe zvaungaite kurodha pasi kuburikidza iTunes kutora mukana wekupihwa uyezve, zvinoenderana nenzvimbo ye iPhone yako kana iPad, isai ivo.
Parizvino hatizive kana mugadziri akaronga kuvhura mutambo mutsva musaga iri, asi hazvingashamise tichifunga kuti Infinity Blade III yakarova pamusika munaGunyana 2013.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo infinity Blade trilogy inowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi
Brazil inovhara madhora mamirioni matanhatu kubva kuaccount maakaunzi nekuda kwematambudziko neWhatsApp